बीपी प्रतिष्ठानमा थप एक संक्रमितको मृत्यु – Suchana Hub
काठमाण्डौ । सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत थप एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा झापाको गौरीगञ्ज घर भएका ७३ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
यहि कार्तिक ६ गते कोरोना पुष्टि भएका उनको यहि शनिबार ६ बजेर ४५ मिनेटमा मृत्यु भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । मृतक पुरुष पहिलेदेखि नै मुटुको समस्याबाट पीडित रहेका थिए ।
Previous होम आइसोलेसनमा बसेका दुइ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
Next राती ढिलो सुत्ने बानी छ ? यति खतरनाक हुन सक्छ …